မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကြွားချင်လွန်းလို့ဗျို…
ဘလော့ဂ်သို့ကြွလာ မိတ်သဟာအပေါင်း မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်စေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။ဆုတောင်းပြီးသကာလ ကြွားပါရစေဗျ။မနေ့ညက staff party မှာ present လဲတော့ ကျမလက်ဆောင်ကြီး မလိုချင်ဘူးလို့ အအော်ခံရသဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနံပါတ်ကျတာက ကောင်မလေးဖြစ်နေသဗျ။ ကျမပေးတဲ့ Bikini နဲ့ shower gel ကို မလိုချင်ဘူး အဲဒါကြီး လိုချင်ပါဘူးလို့ အော်တာဗျ။ ဟွန့် ဘီကီနီနဲ့ မွှေးမွှေးလေး ရေချိုးဖို့ ပေးတာကိုများနော်။ကျမရတဲ့ လက်ဆောင်ကတော့ staff of year 2007 ဆိုရင်တော့ လိပ်ကြီးကြီးထိလေ့ ရှိတဲ့ ကျမအတွက်(late comer) ဆုသဘောမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ နှစ်သစ်လက်ဆောင် Alarm ပါတဲ့ စားပွဲတင်နာရီလေးဗျ။နောက် အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ Lucky Draw ဗျ။ ပွတာပဲ။ ကျမပေါက်တာက ဒီနေ့ည Sabai Sabai မှာ ညစာ နှစ်ယောက်သွားစားခွင့်တဲ့ ။ ဘယ်သူအဖေါ်လုပ်မလဲဗျို။ (ကျမကိုတွေ့ချင် မိအောင်ဖမ်းနော်။ လျှောက်လွှာတော့ လက်မခံပါဘူး အဟိ)ဆုပေးတဲ့ အစီအစဉ်လေးလဲ ပါသေးတော့ ရင်ခုန်စရာပါ။ ကျမက late comer အနေနဲ့ ကြော်ငြာခံထိရင် ရှက်စရာကြီးနော်။ တော်ပါသေးရဲ့ အဲဒီဆုမျိုးမပါဘူးတဲ့။ ကျမက ဘာရလဲသိလား။ မပြောတော့ပါဘူးလေ ဒီမှာကြည့် အဟိ။ မကြွားရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ ကြွားပါရစေနော်။ (မုံ့ကျွေးခိုင်းခြင်းတော့ သည်းခံပါ အဟက်ဟက်) ဆုတွေပေးပြီးနောက်မှာတော့ ပျော်ရွှင်စရာ games သုံးလေးခုလောက် ကစားဖြစ်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ဘော့စ်က နည်းနည်းပါးပါးစကားပြောပြီး စားသောက်ဆိုင်(10နာရီထိပဲ ဖွင့်ရတဲ့ ) ဆိုင်ဖြစ်လို့ 10နာရီခွဲမှာ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်တော့ ပြောမပြတော့ဘူးနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 2008 နှစ်သစ်ရဲ့ ကျမအတွက် ကြိုဆိုပုံလေးကလဲ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဗျို။ကျမနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းအားလုံးလဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ ….
ညီမလေး မီမီရေ,Glad to see you received the "Employee of the Year" award. It'satestimony and recognition of your hard work and abilities :)
သဉ္ဇာ - Thinzar
တနားပါတယ်။ lucky darw ပေါက်တာတောင် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန် သွးစားရရှာတယ်။ ကျွတ်ကျွတ်...နာနဲ့ များကွာပါ့
Good Job. မမီရေ...ဂုဏ်ယူတယ်ကွာ်...Keep it up...Yan.
Alvin အစ်ကိုကြီး၊ သဉ္ဗာ၊ ကောင်းကင်၊ ခွန်မောင်၊ ရန်ရန် တို့ရေ သိုင်းခရုဗျာ
ရန်ကုန် နှင့် မန်းဘလော့ဂါ လူဟောင်းလူသစ်များ အလွတ်သ...
ရွှေရောင်သောကြာနေ့ (သို့မဟုတ်) Blues Rock Night
Monthly Statistics about visitors in my myanmar bl...
ခရီးသွားတုန်း သတိထားမိတဲ့ ထူးခြားမှုလေးတွေ
Staff vacation (သို့မဟုတ်) မယ်လိုဒီ၏ ခရီးသွားတောလာ...